20 Minamato Yekunamatira Kune kweMweya Kusimba | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato 20 Minamato Yekunamatira Kune Simba reMweya
20 Minamato Yekunamatira Kune Simba reMweya
Pisarema 46: 1-3:
1 Mwari ndiye utiziro bwedu nesimba redu, irwo rubatsiro rwehasha pakutambudzika. 2 Naizvozvo isu hatingazotyi, kunyange pasi richizobviswa, uye kunyange makomo akapinzwa mukati megungwa; 3 Kunyange mvura yaro ichibvunda nokutambudzika, Kunyange makomo achizununguka nokudengenyeka kwayo. Selah.
Mujaho wechiKristu haugone kumhanyiswa simba yenyama, bhaibheri rinotaura pachena kuti nesimba hakuna munhu anogona kukunda pamberi paMwari, 1Samueri 2: 9. Zuva raunotanga kuvimba nesimba rako kuti ushumire Mwari zvinobudirira izuva raunotanga kukundikana, izvi zvinodaro nekuti simba remunhu rakanangidzirwa kukundikana. Wese mutendi anoda simba remweya, iri isimba rinobva kuna Mwari kuburikidza nemweya unoera. Zekaria 4: 6 inotiudza kuti tinogona chete kubudirira nemweya wake, kwete nesimba redu. Nhasi ndasanganisa makumi maviri eminamato yekusimbisa mweya. Iyi minamato yemunamato ichakoka mweya waMwari kuti vakusimbise mukati memunhu wemukati.
Iwe haugone kuzviita uri wega, unoda Mweya Mutsvene, unoda simba remweya, chikonzero nei Jesu akatitumira Mweya waMwari, imhaka yekuti isu tingadai tisina kuzviita onnkur pachedu, mweya Mutsvene unonzi mutibatsiri wedu. , nekuti anotipa simba remweya. Iyo Ho! Y Mweya zvinotibatsirawo munguva yedu yekushaya simba. Dhiyabhorosi anogara achitsvaga nzira dzekushandisa zvisina simba mavara edu, asi chero bedzi isu takashongedzwa pamweya, isu tinogara tichikunda dhiabhori. Ndinokukurudzira kuti unamate iyi minamato yekusimba kwemweya nemoyo wako wese, iwo unonyanya kukosha munamato, unoda simba raMwari kuti upedze mujaho uyu uye upedze zvakanaka. Sezvo iwe uchinamata uyu munamato kubva pachikwereti chemoyo wako, gamuchira nyasha dzekukunda mukupedzisira muzita raJesu.
1. Baba, ndinokutendai nekusvika parizvino kundibatsira kuti ndikushumirei nesimba renyu ramwari muzita raJesu.
2. Ndinozvifukidza neropa raJesu.
3. Ini ndinobata ropa raJesu, se nhovo kubva pane chero simba ranga ragadzirira kuramba ini, muzita raJesu.
4. Neropa raJesu, ini ndinomira kupesana neese chinhu chinotsausa, muzita raJesu.
5. Ini ndinomira pashoko raMwari uye ndinotaura ndisingazungunuke, muzita raJesu.
6. Baba Ishe, ndipindireiwo nemavhitamhepo enyu eMweya anozoita kuti ndive noutano hwakanaka pamweya, muzita raJesu.
7. Baba Lord jekiseni ini nemweya mavhitaminzi anozowedzera shungu dzangu kuti ndidye Izwi renyu, muzita raJesu.
8. Baba Ishe, pinza ropa rangu nemweya mavhitaminzi anozoburitsa nzara uye nyota yeminamato mandiri, muzita raJesu.
9. Ishe Mwari, ndipindireiwo nemweya mavhitaminzi anozobvisa chiratidzo changu uye asimbise kujekeseka kwawo, muzita raJesu.
10. Ishe Mwari, ndipireiwo mavhitamini emweya anozondisimbisa mumazuva akaipa, muzita raJesu.
11. Ishe Mwari, ndipireiwo nekudzivirirwa kwehumwari huya huchauraya hutachiona hwomweya uye huipi hwakaipa mandiri, muzita raJesu.
12. Ishe Mwari, mundibaye nesimba remweya rinozoita kuti ndisaneta nemi, muzita raJesu.
13. Ishe Mwari, ndidyisei nechikafu chevaiti, muzita raJesu.
14. Ishe Mwari, wedzerai simba rangu kumhanya nhangemutange yakaiswa pamberi pangu, muzita raJesu.
15. Ndinogashira kuzodzwa kunonyaradza uye nesimba muMweya Mutsvene, muzita raJesu.
16. Ini ndinogashira huchenjeri husinga pfuure hweMweya Mutsvene, muzita raJesu.
17. Ini ndinotora nhovo yerutendo kudzima dhivha dzose dzinopisa dzemuvengi, muzita raJesu.
18. Ini ndinomhanyira muzita raIshe, inova shongwe yakasimba, uye ndakachengeteka, muzita raJesu.
19. Baba ishe, garai mandinwisa mvura kubva patsime renyu risingaperi remufaro, muzita raJesu.
20. Baba, ndinokutendai nekupindura minamato yangu yose muzita raJesu.
Previous nyaya30 Chikumbiro chemunamato Pakutyora joka
inotevera10 Aggressive Munamato Pfungwa dzeKukanganisa Kuita
Margret van de Laar Kubvumbi 7, 2020 At 7:55 am
Het gebed van u zet mij op poten!
Er ndiye kracht mu het Woord en muna Uw woorden.
20 Kununurwa Pfungwa dzeMunamato Yekuchengetedza Kuroora
Raira Iwo Manheru Emunamato Points